200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 Micheal Keating oo shaki geliyay in doorashada Soomaaliya ay ku dhici doonto waqtigii loogu tala galay | UfeynNews.com
Micheal Keating oo shaki geliyay in doorashada Soomaaliya ay ku dhici doonto waqtigii loogu tala galay
Sep 10, 2016 - jawaab
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa shaki ka muujiyay in doorashada Soomaaliya inay ku dhacdo waqtigii loogu tala galay, isagoo caddeeyay in Beesha Caalamka aanay aqbali doonin khilaaf siyaasadeed oo sababa dib u dhac doorasho.
Danjire Micheal Keating oo wareysi siiyay Laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa qiray in dib u dhaca ku yimid jadwalkii doorashada ay aheyd in Hoggaamiyeyaasha ay dhameystiraan nidaamka doorashada, isagoo rajo ka muujiyay in dhowrka bilood ee soo socota ay doorasho dalka ka dhici doonto.
“Waxaa aad u muhiim ah in si dhab ah loo raaco jadwalka doorashada, balse hadii ay jiraan sababo farsamo oo dib u dhac keeni kara sida ugu wanaagsan, ayaa la rabaa in loo raaco”ayuu yiri Danjire Micheal Keating.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Beesha Caalamka iyo ururada bulshada rayidka aanay aqbali doonin dib u dhac dambe oo ku timaada doorashada.
“Beesha Caalamka iyo ururada bulshada rayidka ma aqbali doonaan khilaaf siyaasadeed oo sababa din u dhac aan waqtigiisa la ogeyn inuu doorashada ku yimaado”ayuu yiri Micheal Keating.
Hoggaamiyeyaasha Madasha Wada-tashiga Qaran ayaa shir albaabada u xiran oo wali aan wax natiijo ah laga gaarin ku leh magaalada Muqdisho, iyadoo ay soo baxayaan kala aragti duwanaan u dhaxeysa Madaxda oo ku aadan nidaamka loo marayo doorashooyinka.
Doorashada oo loo qorsheeyay inay dhacdo 30 bisha October ayaa dad badan shaki gelinayaa in xilligii loogu tala galay ku dhacdo.